Indlela yokwenza izinto zesikhumba
Izigubhu zesikhumba, iingubo, iingubo zemvula - uphawu olubalulekileyo lwengubo yangaphandle yesigcino sekwindla yabasetyhini abaninzi. Ngelishwa, iimveliso zesikhumba zihlala zibonakala zibonakala kakuhle, i-crumple emva kwexesha elide lihlala kwiikhabhinethi ehlobo okanye ebusika. Kodwa akuyena wonke umntu owaziyo indlela efanelekileyo yokwenza isicatshulwa semveliso yesikhumba kunye nokuchaneka kokukhethwa kwemveliso kule meko. Kule meko, cetyiswa ukuba usebenzise iinkonzo zokucoca ngokucokisekileyo, kwaye ungabi nokulwa neengxaki ngokwazo.
Nangona ukuba iinkonzo ezifanayo zansuku zonke zikhona ngokuqhelekileyo kuzo zonke iidolophu, ukuze silondoloze imali yakho, sifuna ukukuxelela malunga neendlela eziliqela zokukhupha izinto zesikhumba ekhaya. Kodwa sifuna ukunumkisa ukuba kuyimfuneko ukubhekisela kule mabhunga ngokucophelela. Isikhumba, zombini kunye nemvelo - into enobunzima kakhulu kwaye indlela engafanelekanga yokutshiza kwayo ingayonakalisa.
Ukususela xa ukuthunga umkhiqizo wesikhumba awusebenzi ngaso sonke isikhathi umgangatho ophezulu, unyango oluchangekileyo olunganyangekiyo lunokunyusa umcimbi. Ukuze kungakhange kuqhutywe inkqubo yohlengahlengiso lwemveliso, kucetyiswa ukuba uqale ukusebenzisa iindlela ezintle kakhulu zokugcoba. Kwimeko apho ezi ndlela zinganiki iziphumo ezilungileyo, ziphendukela ekusebenziseni iindlela ezininzi.
"Indlela ekhuselekileyo" njengendlela yokutshiza ibhatyi lesikhumba
Le ndlela yindlela elula kwaye elula yokulungisa izinto zeekhumba. Yonke into efunekayo kule nto - vele uxhomeke into efanelekileyo kwi-hanger-hanger kwaye, njengoko ilizwi lihamba, linike ityala. Ukuba kukho ama-creases okanye amafolda angafunekiyo kwimveliso yakho, le ndlela yindlela elula kwaye yindlela ephumelelayo yokususa iimpazamo.
Kodwa kungakhathaliseki ukuba le ndlela yayilungileyo kangakanani, i-disadvantage isabikho kuyo - ukwenzela ukuba isitye ngale ndlela, ibhatyi okanye i-raincoat iya kuthatha iintsuku eziliqela (ngokuqhelekileyo ngeveki). Akuyena wonke umntu oya kuneliswa ngethuba elide lokulinda. Kodwa iimveliso ezenziwe ngezinto ezincinci zanele iintsuku ezingama-1-2.
I-Steam View ye-Straightening Products Products
Ngene ngokungenanga abo bafazi abancincileyo emzimbeni wemveliso yesikhumba ngamanzi kwaye baxhomeke kuma-hangers, balindele ukuba umphumo wokulungisa. Ukuqhagamshelana ngqo kwamanzi kwesikhumba akunakunqweneleka.
Kodwa unyango lwe-steam luvunyiwe. Kodwa kukho abo abangathandi le ndlela. Nangona kunjalo, ukuphunyezwa kwemveliso kusebenza kakuhle. Sebenzisa okulula kakhulu - uthele ihafu yesibhengezo yamanzi atshisayo kwaye uxhomeke kuyo into efanelekileyo. Kodwa ngokubaluleka kubaluleke ukulandela izinga lokukhuphuka kwamanzi. Isizukulwana esiphezulu somphunga singonakalisa umkhiqizo.
Enye indlela yokwenza i-steaming ukusebenzisa i-generator-steam ngesandla, esetyenziswa kwiindawo ezininzi zokugcina iimpahla. Ukuphakama okuphezulu kweso sixhobo ngamasentimitha ayi-10. Esi sixhobo sinokutshintshwa ngensimbi kunye nomsebenzi ofanayo.
I-Vaseline kunye nebhokisi ye-peanut njengomlingani wezinto zesikhumba
Nangona ukuba le ndlela ayidla ngokusetyenziswa, iyona nto ihamba ngayo yonke indlela. Ingundoqo yinto elula - i-moisten i-cotton pad kwi-vaseline kwaye iyiphatha yonke indawo okanye "ingxaki" kwindawo leyo. Emva koko, lixhomeke, njengesiqhelo, kuma-hangers, phuma kwiiyure ezimbalwa kwindawo enomoya-moya (kwibhankoni okanye loggia, umzekelo).
I-Vaseline kule meko inokuthi ithathelwe endaweni yeoli ye-walnut, kodwa kungekhona wonke umntu onokukwazi ukuthenga umkhiqizo obiza kangaka, kwaye akuthengi kuyo yonke imizi.
Ingaba usebenzisa i-iron kwisilungiso sezinto zesikhumba?
Ngokuqhelekileyo, ukusebenzisa intsimbi kwizinto ezenziwe ngesikhumba kungabalulekanga, kodwa kukho iindlela ezimbalwa xa kusetyenziswe isinyithi. Umzekelo, ukushisa kwefuthe insimbi kufuneka ibe yinto encinci, kwaye loo mveliso ihlanganiswe ngoluhlu oluncinci lwephepha le-Kraft (eli phepha lisetyenziselwa ukudlulisa ifenitshala kwikhadibhodi eyenziwe ngezandla zomntu) kwaye i-ironed kunye nayo. Kodwa akukho ndlela kwesikhumba. Akuyimfuneko kule nkqubo ukusebenzisa umenzi wesiphelo, kwaye ke kucetyiswa ukuba ugqoke into echanekileyo nje emva kwenkqubo. Nika ithuba lokupholisa phantsi kwamagxa.
IiOyile eziBalulekileyo kwiBomi bemihla ngemihla
Kamsinya kangakanani ukubuyisela umyalelo endlwini?
Indlela yokuphumelela, ukuphumelela, entle, onwabileyo
Ukudumisa kunye nomona - ngaba kuhle okanye kubi?
Ukuthenga iimpahla kwiintsana
I-Aquarium: indlela yokugcina kakuhle intlanzi, iingcebiso kubaqalayo
Ukunyangwa kwamehlo ngaphandle kokuhlinzwa
UNatalie Wood: ukwesaba kobubele
Isaladi yeebhontshisi, ishizi yebhokhwe kunye ne-arugula
I-Pasta eneflethi yenkukhu
Isaladi kunye ne-shrimps ne-squid
U-Yana Rudkovskaya noVeveni Plushenko balungiselela umboniso omtsha weqhwa "I-Nutcracker"
Amathanga enkukhu ahlambulukileyo ebhiya
Isaladi kunye nobhontshisi obuhlaza kunye ne-feta cheese
Ukuziphatha komntu, xa watshintsha
I-perfume-2015 yindoda eninzi kunye nabasetyhini
Impembelelo engalunganga yokusebenza kwimpilo yabantu
6 iincwadi zentsha
I-pastry ye-Puff ne-cottage cheese